နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတော်
အိုလံပစ်မီရူးတိုင်အား ရီယိုဒီဂျနရိုမြို့၌ ၂၀၁၆ နွေရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမြင်တွေ့ရစဉ်
နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော် ( ပြင်သစ်: Jeux olympiques d'été )  သို့မဟုတ် ၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့သော အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လေးနှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားကစားပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ လတ်တလောနွေရာသီအိုလံပစ် အား ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရီယိုဒီဂျနေရို တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) သည် အားကစားပွဲများကို စီစဉ်ပြီး အိမ်ရှင်နိုင်ငံ၏ပြင်ဆင်မှုများကို ကြီးကြပ်သည်။ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတိုင်းတွင် ပထမနေရာများကို ရွှေတံဆိပ် ၊ ဒုတိယနေရာကို ငွေတံဆိပ်များနှင့် ကြေးဝါတံဆိပ်များ ကိုတတိယနေရာအတွက်ချီးမြှင့်သည်။ ဒီအစဉ်အလာကို ၁၉၀၄ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစား ကို နွေရာသီအိုလံပစ်၏အောင်မြင်မှုအရ ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ ၁၄ နိုင်ငံမှအမျိုးသားပြိုင်ပွဲဝင် ၂၅၀ ဦးထက်နည်းသော ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၄၂ခု ဖြင့်ကျင်းပလာသော အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၆ နိုင်ငံမှ အားကစားနည်း ၃၀၆နည်းတွင် ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁,၂၃၈ဦး (အမျိုးသား ၆,၁၇၉ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၅,၀၅၉) အထိတိုးပွားလာသည်။
နွေရာသီအိုလံပစ်ကို တိုက်ကြီးငါးတိုက်ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၁၉) နိုင်ငံကတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအားကစားပြိုင်ပွဲအား အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှ လေးကြိမ်( ၁၉၀၄, ၁၉၃၂, ၁၉၈၄ နှင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်) ၊ ဂရိတ်ဗြိတိန်မှ သုံးကြိမ်( ၁၉၀၈, ၁၉၄၈နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် များတွင် နှစ်ကြိမ်စီ) ၊ ဂရိနိုင်ငံမှ နှစ်ကြိမ်( ၁၈၉၆ နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်) ၊ပြင်သစ်နိုင်ငံ ( ၁၉၀၀ နှင့် ၁၉၂၄ခုနှစ်) ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ ( ၁၉၃၆ နှင့် ၁၉၇၂ခုနှစ်) နှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ( ၁၉၅၆ နှင့် ၂၀၀၀ခုနှစ် ၊ နှင့် ဆွီဒင်မှ တစ်ကြိမ်( ၁၉၁၂ခုနှစ်)၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ( ၁၉၂၀ခုနှစ် )၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ( ၁၉၂၈ခုနှစ် )၊ ဖင်လန် ( ၁၉၅၂ခုနှစ် )၊ အီတလီနိုင်ငံ ( ၁၉၆၀ခုနှစ် )၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ( ၁၉၆၄ ခုနှစ် )၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ( ၁၉၆၈ ခုနှစ်)၊ ကနေဒါနိုင်ငံ ( ၁၉၇၆ခုနှစ် )၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ( ၁၉၈၀ခုနှစ် )၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ( ၁၉၈၈ ခုနှစ်)၊ စပိန်နိုင်ငံ ( ၁၉၉၂ ခုနှစ် )၊ တရုတ်နိုင်ငံ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ်) နှင့် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ( ၂၀၁၆ခုနှစ် ) အိမ်ရှင်နိုင်ငံများအဖြစ် အသီးသီးလက်ခံကျင်းပခဲ့ကြသည်။
အိုင်အိုစီသည် ၂၀၂၀ နွေရာသီအိုလံပစ် ကိုကျင်းပရန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ (သို့သော် အခြေအနေအရ ၂၀၂၁ခုနှစ် တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်) ၂၀၂၄ နွေရာသီအိုလံပစ် ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ ၌ တတိယအကြိမ်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။(၎င်း၏ နောက်ဆုံးနွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲအား ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် လက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်) အိုင်အိုစီသည် ၂၀၂၈ နွေရာသီအိုလံပစ် အတွက် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ ၊ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အားရွေးချယ်ထားသေးသည်။
နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို ဩစတြေးလျ ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၊ ဂရိတ်ဗြိတိန် ၊ ဂရိနိုင်ငံ နှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ တို့မှာ နှစ်စဉ် ပုံမှန်မပျက်ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်သည် နွေရာသီအိုလံပစ်အတွက် ဆုတံဆိပ်ရ ဇယားတွင် အမြဲလိုလို ဦးဆောင်သည်။
၃ အချိန်အားလုံးအရ ဆုတံဆိပ်ရ ဇယား
၃.၁ အနိုင်အရဆုံး နိုင်ငံများ
၄ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများ စာရင်း
နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ လက်ခံကျင်းပသော နိုင်ငံများပြမြေပုံ - နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကို တစ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည့်နိုင်ငံများသည်အစိမ်းရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။ နှစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်)နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုသော နိုင်ငံများကို အပြာရောင်ဖြင့်ပြထားသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကို လေးကြိမ်တိုင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၉၀၄ အားကစားပွဲကို မစ်ဆူရီပြည်နယ် စိန့်လူးဝစ္စ တွင်လည်းကောင်း၊ ၁၉၃၂ နှင့် ၁၉၈၄ခုနှစ် အားကစားပွဲများကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် တွင်လည်းကောင်း ၊ ၁၉၉၆ခုနှစ် ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် ၊ အတ္တလန်တာမြို့ တို့တွင်လည်းကောင်း အသီးသီးကျင်းပခဲ့သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၈ အားကစားပွဲ သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် နွေရာသီအားကစားပွဲတော် ဖြစ်လာသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည် ၎င်း၏တတိယအကြိမ် နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို လန်ဒန်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုသုံးကြိမ်ကျင်းပသည့်ပထမဆုံးမြို့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ပါရီ နှင့် အေသင် မြိုမြို့ကြီးများတွင်နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲအား နှစ်ကြိမ်စီ လက်ခံကျင်းပခဲ့ဖူးသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သည် ၎င်း၏တတိယအကြိမ်နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပါရီမြို့သည် နွေရာသီအိုလံပစ်သုံးကြိမ်မြောက် ကျင်းပသည့်ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်သည်သုံးကြိမ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်တတိယမြောက်မြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ၊ ဂျာမနီ နှင့် ဂရိနိုင်ငံ များအားလုံးသည်နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုနှစ်ကြိမ်စီ ကျင်းပခဲ့သည်။ IOC သည် ၂၀၂၀ နွေရာသီအိုလံပစ် ကိုကျင်းပရန် တိုကျို ကိုရွေးချယ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ် နွေရာသီအားကစားပွဲများကို အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီးနောက် အာရှတိုက်တွင် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့်ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်လာသည်။ နွေရာသီအိုလံပစ်အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံများမှဖြစ်ကြသော ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၊ ကနေဒါနိုင်ငံ ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ ၊ အီတလီနိုင်ငံ ၊ မက္ကစီကိုနိုင်ငံ ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ, ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၊ စပိန်နိုင်ငံ ၊ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ များသည် နွေရာသီအားကစားပွဲများကို တစ်ကြိမ်စီသာ ကျင်းပခဲ့သည်။
အာရှတိုက်သည် တိုကျို ဂျပန် ( ၁၉၆၄ )၊ ဆိုးလ် တောင်ကိုရီးယား ( ၁၉၈၈ ) နှင့် ပေကျင်း တရုတ် ( ၂၀၀၈ ) တို့ဖြင့် နွေရာသီအိုလံပစ်ကို သုံးကြိမ်တိုင် ကျင်းပခဲ့ရသည်။ အာရှသည် အိမ်ရှင်အဖြစ် ၂၀၂၀ တိုကျို အိုလံပစ် အား စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့် နွေရာသီအိုလံပစ်အား မူလသတ်မှတ်ထားသည့်နေ့မှ နောက် ၁၂ လအထိ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရနွေရာသီအိုလံပစ်အား အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံ များ၌ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။  တိုကျိုသည်နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုနှစ်ကြိမ်ကျင်းပသည့်ဒေသများအနက် ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှစ၍ အားကစားပွဲများကို အများဆုံး လက်ခံကျင်းပမည့် မြို့ဖြစ်လာသည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ရီယိုဒီဂျနေရို တွင်ကျင်းပခဲ့သော ၂၀၁၆ နွေရာသီ အားကစားပြိုင်ပွဲ သည် တောင်အမေရိကတွင် ကျင်းပမည့်နွေရာသီအိုလံပစ်ဖြစ်ပြီးဒေသတွင်း ဆောင်းရာသီ တွင်ကျင်းပခဲ့ဖြစ်သည်။ တောင်ဘက်ခြမ်းရှိ နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံမှာဩစတြေးလျ ( ၁၉၅၆ နှင့် ၂၀၀၀ ) နှင့်ဘရာဇီး ( ၂၀၁၆) တို့ဖြစ်သည်။ အာဖရိက မှာမူ နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲကျင်းပခြင်း မရှိသေးပါ။
Panathenaic အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသောပထမဆုံးအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ခေတ်သစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကို ၁၈၉၄ တွင်ပြင်သစ်လူမျိုး ဗဲရွန်ဘွဲ့ရ ပီယဲကူဗာတင် မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အပျော်တမ်း အားကစားသမားများအား ပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြစေရန်ဖြစ်ကာ အားကစားသမားများအား နိုင်ငံရေးဖိအားများမှ ကင်းလွတ်၍ သန့်ရှင်းသောအားကစားနည်းများ ပိုမိုတိုးတက် လာစေရန်ဖြစ်သည်။
၁၈၉၆ တွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံက ကစားသမားပေါင်း ၂၀ဝ ကျော် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သော ပထမဆုံး ခေတ်သစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများ၏ သန္ဓေတည်ရာ မူလအစဖြစ်သည့် အေသင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။၎င်းတို့အနက် ၂၀၀ ကျော်သည်ဂရိလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ၁၄ နိုင်ငံသာကိုယ်စားပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ ဤပွဲတော်မတိုင်မီ ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပွဲတော်များ စီစဉ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သေးပါ။ ထိုစဉ်က အမျိုးသမီးအားကစားသမားများကို ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မပြုခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သူ Stamata Revithi သည် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကို ခွင့်ပြုခြင်းမရှိ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး "ကော်မတီကငါ့ကိုပြိုင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင် သူတို့ခွင့်မတောင်းပဲ ဝင်ပြိုင်မယ် " ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ 
၁၈၉၆ နွေရာသီအိုလံပစ်အားကစားပွဲတော် ကိုတရားဝင်အားဖြင့်လူသိများသော အိုလံပစ်အားကစားပွဲ သည် ဂရိနိုင်ငံ၊ အေသင် ၌ ၁၈၆၆ ဧပြီ ၆ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျက်မှောက်ခေတ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော ပထမဆုံးအိုလံပစ်အားကစားပွဲဖြစ်သည်။ အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲမှာ လူ တစ်သိန်း လောက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အားကစားသမားများသည် ၁၄ နိုင်ငံမှဖြစ်ကာ အများစုမှာ ဂရိမှဖြစ်သည်။ ဂရိ တွင်အားကစားသမားအများဆုံးရှိသော်လည်း အမေရိကန်သည် ဆုတံဆိပ်အများဆုံးနှင့်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အမေရိကန်မှ ၁၁ ယောက်သည် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ပွဲများတွင် ပထမနေရာရရှိခဲ့ကြပြီး ဂရိမှ ၁၀ ဦး ရရှိခဲ့သည်။  ရှေးဂရိသည် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ၏မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အေသင်သည် နောက်ပိုင်းကျင်းပသော ခေတ်သစ်အားကစားပွဲများကို လွှဲပြောင်းရန် သင့်လျော်သည်ဟုခံယူထားကြသည်။ ပြင်သစ် မျိုး နှင့်သမိုင်းပညာရှင် ပီရာရီကော်ဘာတင် က ၁၈၉၄ခုနှစ် ၊ ဇွန် ၂၃ ရက်တွင်ကျင်းပသော ကွန်ဂရက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီကို စတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ခေတ်သစ်အိုလံပစ် စည်းမျဉ်းများအား ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
အခက်အခဲများ နှငအားနည်းများစွာရှိသော်လည်း ၁၈၉၆ အိုလံပစ်အား ကျင်းပနိုင်ခဲ့ခြင်းအား ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုအဖြစ်မှတ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအားကစားပွဲများသည်မည်သည့်အားကစားပွဲတွင်မဆိုတွင် နိုင်ငံအလိုက် ပါဝင်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။ Panathinaiko အားကစားကွင်းသည် မျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးအားကစားကွင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားကစားပွဲတစ်ခုကြည့်ရန်လူအများအပြားနှင့်ပြည့်လျှံနေသည်။ ဂရိလူမျိုးများအတွက်အထူးထင်ရှားသောအချက်မှာ ရေပို့သမားလေး Spiridon Louis ၏ မာရသွန်ပြေးပွဲ အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ၂ နာရီ ၅၈ မိနစ်နှင့်စက္ကန့် ၅၀ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ပြီး ယင်းအားကစားကွင်း၌အောင်ပွဲများကျင်းပခဲ့သည်။ အအောင်မြင်ဆုံးပြိုင်ဘက်မှာရွှေတံဆိပ်လေးခုဆွတ်ခူးနိုင်သည့်ဂျာမန် နပန်းအားကစားပြိုင်ဖက် နှင့် ရွေတံဆိပ်လေးဆုရှင် ကျွမ်းဘားသမား Carl Schuhmann ဖြစ်သည်။
ဂရိအစိုးရနှင့်လူထုသည်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်။ အားကစားသမားများစွာကထိုခံစားချက်ကိုခံစားခဲ့ကြပြီးအေသင်သည်အမြဲတမ်းအိုလံပစ်အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် IOCသည် နောက်အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ကမ္ဘာအနှံ့ရှိနိုင်ငံများသို့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံများ အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အိုလံပစ် အား ပဲရစ်မြို့ တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ 
နောက် လေးနှစ်အကြာတွင် ၁၉၀၀ နွေရာသီအိုလံပစ် ပဲရစ် အား ပိုမိုများလာသော အားကစားနည်းများဖြင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမျိုးသမီးအားကစားသမား အယောက် ၂၀ကို ဂေါက်သီး ၊ ရွက်လှေ နှင့် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သည်။
၁၉၀၄ နွေရာသီအိုလံပစ် ကာလအတွင်း စိန့်လူးဝစ်ရှိဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်မှ Francis Field အား မြင်တွေ့ရစဉ်
Dorando Pietri က ခေတ်မီမာရသွန်ပြေးပွဲအား အပြီးသတ်ရန် အချိန်ပိုင်း၌ တွေ့မြင်ရစဉ်
ရရှား-ဂျပန်စစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တင်းမာမှုများနှင့် စိန့်လူးဝစ္စသို့ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အခက်အခဲများကြောင့်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါနိုင်ငံပြင်ပမှ ထိပ်တန်းအဆင့်အားကစားသမားအနည်းငယ်ဖြင့်သာ ၁၉၀၄ အားကစားပွဲ၌ ပါဝင်ခဲ့ကြရသည်။
သေးငယ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုစီးရီး ၁၉၀၆ခုနှစ်တွင် အေသင်မြို့၌ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ IOCသည်ဤအားကစားများကိုတရားဝင်အိုလံပစ်အားကစားအဖြစ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုသော်လည်းသမိုင်းပညာရှင်များစွာကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ၁၉၀၆ခုနှစ်အေသင် အားကစားပွဲများသည်အေသင်နောက်ပိုင်းကျင်းပမည့်နောက်ဆက်တွဲ အားကစားအမျိုးအစားတစ်ခု၏ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းသည်အားကစားသမား ၉၀၀ကျော်နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်ဂိမ်း၏အောင်မြင်မှုကိုအပြုသဘောဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
၁၉၀၈ လန်ဒန်အားကစားပြိုင်ပွဲ သည် အကြိမ်ရေ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏စံသတ်မှတ်ထားသောအကွာအဝေး ၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ ကီလိုမီတာ (၂၆မိုင် ၃၈၅ကိုက်)ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မာရသွန်ပြေးပွဲ ၌တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအိုလံပစ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ (အမျိုးသားပြိုင်ပွဲသာ) သည်အကွာအဝေး ၄၀ ကီလိုမီတာ ကီလိုမီတာ (၂၄မိုင် ၈၅ကိုက်) တွင်အပြေးပြိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲသစ်ကိုဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုကသိမ်းပိုက်ထားသည့်သေတ္တာရှေ့တွင်ပြိုင်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မာရသွန် ၄၀ ကီလိုမီတာ (၂၄.၉ မိုင်) ဖြစ်ခဲ့သည် ၁၈၆၉ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးဂိမ်းများအတွက်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းတွင် ၂ ကီလိုမီတာ (၁.၂ မိုင်) အထိကွဲပြားခဲ့သည်။ လမ်းနှင့်အားကစားရုံအပြင်အဆင်ကဲ့သို့သောဒေသအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၀၀ နှင့် ၁၉၂၀ အကြားအိုလံပစ်အားကစားပွဲခြောက်ခုတွင်မာရသွန်သည်အကွာအဝေးခြောက်ခုကျော်ပြေးဆွဲခဲ့သည်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်သည် ဆုတံဆိပ် ၁၄၆ ခု၊ ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည့် အမေရိကန် များထက် ၉၉ ခုအနိုင်ရခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပြီးယနေ့အထိအကောင်းဆုံးရလဒ်ဖြစ်သည်။
အချိန်အားလုံးအရ ဆုတံဆိပ်ရ ဇယား[ပြင်ဆင်ရန်]
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် IOC မှတရားဝင်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုထားသည်။ 
အမေရိကန် ၂၇ ၁၀၂၂ ၇၉၅ ၇၀၅ ၂၅၂၂
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ ၉ ၃၉၅ ၃၁၉ ၂၉၆ ၁၀၁၀
ဂရိတ်ဗြိတိန် ၂၈ ၂၆၃ ၂၉၅ ၂၉၃ ၈၅၁
တရုတ် ၁၀ ၂၂၄ ၁၆၇ ၁၅၅ ၅၄၆
ပြင်သစ် ၂၈ ၂၁၂ ၂၄၁ ၂၆၃ ၇၁၆
အီတလီ ၂၇ ၂၀၆ ၁၇၈ ၁၉၃ ၅၇၇
ဂျာမနီ ၁၆ ၁၉၁ ၁၉၄ ၂၃၀ ၆၂၅
ဟန်ဂေရီ ၂၆ ၁၇၅ ၁၄၇ ၁၆၉ ၄၉၁
အရှေ့ဂျာမနီ ၅ ၁၅၃ ၁၂၉ ၁၂၇ ၄၀၉
ရုရှား ၆ ၁၄၈ ၁၂၅ ၁၅၃ ၄၂၆
ဩစတြေးလျ ၂၆ ၁၄၇ ၁၆၃ ၁၈၇ ၄၉၇
ဆွီဒင် ၂၇ ၁၄၅ ၁၇၀ ၁၇၉ ၄၉၄
ဂျပန် ၂၂ ၁၄၂ ၁၃၆ ၁၆၁ ၄၃၉
ဖင်လန် ၂၅ ၁၀၁ ၈၅ ၁၁၇ ၃၀၃
တောင်ကိုရီးယား ၁၇ ၉၀ ၈၇ ၉၀ ၂၆၇
ရိုမေးနီးယား ၂၁ ၈၉ ၉၅ ၁၂၂ ၃၀၆
နယ်သာလန် ၂၆ ၈၅ ၉၂ ၁၀၈ ၂၈၆
ကျူးဘား ၂၀ ၇၈ ၆၈ ၈၀ ၂၂၆
ပိုလန် ၂၁ ၆၈ ၈၄ ၁၃၂ ၂၈၄
ကနေဒါ ၂၆ ၆၄ ၁၀၂ ၁၃၆ ၃၀၂
အမေရိကန် - ၁၇ ကြိမ်
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ / Unified Team - ၇ ကြိမ်
ပြင်သစ် - ၁ ကြိမ်
ဂရိတ်ဗြိတိန် - ၁ ကြိမ်
ဂျာမနီ ဂျာမနီ - ၁ ကြိမ်
တရုတ် - ၁ ကြိမ်
နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများ စာရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈၉၆ I အေသင်မြို့ ပုပ်ဘုရင် တစ် ၉ (၁၀) ၂၄၁ ၂၄၁ ၀ ၄၃ ၁၄ ၆–၁၅ ဧပြီ ၁၈၉၆ အမေရိကန် 
၁၉၀၀ II ပဲရစ်မြို့ N/A ၁၉ (၂၀) ၉၉၇ ၉၇၅ ၂၂ ၈၅[upper-alpha ၁] ၂၄ ၁၄ မေ – ၂၈ အောက်တိုဘ ၁၉၀၀ ပြင်သစ် 
၁၉၀၄ III စိန့်လူးဝစ်မြို့ Former Governor David R. Francis ၁၆ (၁၇) ၆၅၁ ၆၄၅ ၆ ၉၄[upper-alpha ၂] ၁၂ ၁ ဇူလှိုင် – ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၀၄ အမေရိကန် 
၁၉၀၈ IV လန်ဒန်မြို့ သတ္တမမြောက် အက်ဒဝပ်ဘုရင် ၂၂ (၂၅) ၂၀၀၈ ၁၉၇၁ ၃၇ ၁၁၀ ၂၂ ၂၇ ဧပြီ – ၃၁ အောက်တိုဘာ ၁၉၀၈ ဂရိတ်ဗြိတိန် 
၁၉၁၂ V စတော့ဟုမ်းမြို့ King Gustaf V ၁၄ (၁၈) ၂၄၀၇ ၂၃၅၉ ၄၈ ၁၀၂ ၂၈ ၆–၂၂ ဇူလှိုင် ၁၉၁၂ အမေရိကန် 
ဘာလင်မြို့မှ ဆက်ခံ သို့သော် ပထမ ကမ္ဘာစစ် ကြောင့် ဖျက်သိမ်းခဲ့
၁၉၂၀ VII အန့်တွပ်မြို့ အဲလဗတ်ဘုရင် ၂၂ (၂၉) ၂၆၂၆ ၂၅၆၁ ၆၅ ၁၅၆[upper-alpha ၄] ၂၉ ၁၄ ဩဂုတ် – ၁၂ စက်တင်ဘာ ၁၉၂၀ အမေရိကန် 
၁၉၂၄ VIII ပဲရစ်မြို့ President Gaston Doumergue ၁၇ (၂၃) ၃၀၈၉ ၂၉၅၄ ၁၃၅ ၁၂၆ ၄၄ ၄ မေ – ၂၇ ဇူလှိုင် ၁၉၂၄ အမေရိကန် 
၁၉၂၈ IX အမ်စတာဒမ်မြို့ Duke Henry of Mecklenburg-Schwerin ၁၄ (၂၀) ၂၈၈၃ ၂၆၀၆ ၂၇၇ ၁၀၉ ၄၆ ၂၈ ဇူလှိုင် – ၁၂ ဩဂုတ် ၁၉၂၈ အမေရိကန် 
၁၉၃၁ X လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ Vice President Charles Curtis ၁၃၃၂ ၁၂၀၆ ၁၂၆ ၁၁၇ ၃၇ ၃၀ ဇူလှိုင် – ၁၄ ဩဂုတ် ၁၉၃၂ အမေရိကန် 
၁၉၃၆ XI ဘာလင်မြို့ Führer Adolf Hitler ၁၉ (၂၅) ၃၉၆၃ ၃၆၃၂ ၃၃၁ ၁၂၉ ၄၉ ၁–၁၆ ဩဂုတ် ၁၉၃၆ ဂျာမနီ 
မူလက တိုကျိုမြို့မှဆက်ခံမည် ဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင် ဟယ်လ်စင်ကီ မှဆက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
၁၉၄၈ XIV လန်ဒန်မြို့ ဆဋ္ဌမမြောက် ဂျော့ဘုရင် ၁၇ (၂၃) ၄၁၀၄ ၃၇၁၄ ၃၉၀ ၁၃၆ ၅၉ ၂၉ ဇူလှိုင် – ၁၄ ဩဂုတ် ၁၉၄၈ အမေရိကန် 
၁၉၅၂ XV ဟယ်လ်ဆင်ကီမြို့ President Juho Kusti Paasikivi ၄၉၅၅ ၄၄၃၆ ၅၁၉ ၁၄၉ ၆၉ ၁၉ ဇူလှိုင် – ၃ ဩဂုတ် ၁၉၅၂ အမေရိကန် 
၁၉၅၆ XVI မဲလ်ဘုန်းမြို့/ Philip, Duke of Edinburgh ၃၃၁၄ ၂၉၃၈ ၃၇၆ ၁၅၁[upper-alpha ၅] ၇၂[upper-alpha ၆] ၂၂ နိုဝင်ဘာ – ၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၅၆ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၆၀ XVII ရောမမြို့ President Giovanni Gronchi ၅၃၃၈ ၄၇၂၇ ၆၁၁ ၁၅၀ ၈၃ ၂၅ ဩဂုတ် – ၁၁ စက်တင်ဘာ ၁၉၆၀ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၆၅ XVIII တိုကျိုမြို့ ဟီရိုဟီတို ၁၉ (၂၅) ၅၁၅၁ ၄၄၇၃ ၆၇၈ ၁၆၃ ၉၃ ၁၀–၂၄ အောက်တိုဘာ ၁၉၆၄ အမေရိကန် 
၁၉၆၈ XIX မက္ကဆီကိုမြို့ President Gustavo Díaz Ordaz ၁၈ (၂၄) ၅၅၁၆ ၄၇၃၅ ၇၈၁ ၁၇၂ ၁၁၂ ၁၂–၂၇ အောက်တိုဘာ ၁၉၆၈ အမေရိကန် 
၁၉၇၂ XX မြူးနစ်ချ်မြို့ President Gustav Heinemann ၂၁ (၂၈) ၇၁၃၄ ၆၀၇၅ ၁၀၅၉ ၁၉၅ ၁၂၁ ၂၆ ဩဂုတ် – ၁၁ စက်တင်ဘာ ၁၉၇၂ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၇၆ XXI မွန်းထရီးအောမြို့ အယ်လီဇဘက် ဒုတိယ ၂၁ (၂၇) ၆၀၈၄ ၄၈၂၄ ၁၂၆၀ ၁၉၈ ၉၂ ၁၇ ဇူလှိုင် – ၁ ဩဂုတ် ၁၉၇၆ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၈၀ XXII မော်စကိုမြို့ Communist Party General Secretary Leonid Brezhnev ၅၁၇၉ ၄၀၆၄ ၁၁၁၅ ၂၀၃ ၈၀ ၁၉ ဇူလှိုင် – ၃ ဩဂုတ် ၁၉၈၀ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၈၄ XXIII လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ President Ronald Reagan ၂၁ (၂၉) ၆၈၂၉ ၅၂၆၃ ၁၅၆၆ ၂၂၁ ၁၄၀ ၂၈ ဇူလှိုင် – ၁၂ ဩဂုတ် ၁၉၈၄ အမေရိကန် 
၁၉၈၈ XXIV ဆိုးလ်မြို့ President Roh Tae-woo ၂၃ (၃၁) ၈၃၉၁ ၆၁၉၇ ၂၁၉၄ ၂၃၇ ၁၅၉ ၁၇ စက်တင်ဘာ – ၂ အောက်တိုဘာ ၁၉၈၈ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ 
၁၉၉၂ XXV ဘာစီလိုနာမြို့ ကာလို့ ဝှမ် ၂၅ (၃၄) ၉၃၅၆ ၆၆၅၂ ၂၇၀၄ ၂၅၇ ၁၆၉ ၂၅ ဇူလှိုင် – ၉ ဩဂုတ် ၁၉၉၂ Unified Team 
၁၉၉၆ XXVI အတ္တလန္တာမြို့ သမ္မတ ဘီလ် ကလင်တန် ၂၆ (၃၇) ၁၀၃၁၈ ၆၈၀၆ ၃၅၁၂ ၂၇၁ ၁၉၇ ၁၉ ဇူလှိုင် – ၄ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၆ အမေရိကန် 
၂၀၀၀ XXVII ဆစ်ဒနီမြို့ Governor-General Sir William Deane ၂၈ (၄၀) ၁၀၆၅၁ ၆၅၈၂ ၄၀၆၉ ၃၀၀ ၁၉၉ ၁၅ စက်တင်ဘာ – ၁ အေက်တိုဘာ ၂၀၀၀ အမေရိကန် 
၂၀၀၄ XXVIII အေသင်မြို့ President Konstantinos Stephanopoulos ၁၀၆၂၅ ၆၂၉၆ ၄၃၂၉ ၃၀၁ ၂၀၁ ၁၃–၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၀၄ အမေရိကန် 
၂၀၀၈ XXIX ဘေဂျင်းမြို့ သမ္မတ ဟူကျင်ထောင်း ၂၈ (၄၁) ၁၀၉၄၂ ၆၃၀၅ ၄၆၃၇ ၃၀၂ ၂၀၄ ၈–၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၀၈ တရုတ် 
၂၀၁၂ XXX လန်ဒန်မြို့ အယ်လီဇဘက် ဒုတိယ ၂၆ (၃၉) ၁၀၇၆၈ ၅၉၉၂ ၄၇၇၆ ၃၀၂ ၂၀၄ ၂၇ ဇူလှိုင် – ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၁၂ အမေရိကန် 
၂၀၁၆ XXXI ရီယို ဒီ ဂျီးနေးရိုးမြို့ Acting President Michel Temer ၂၈ (၄၁) ၁၁၂၃၈ ၆၁၇၉ ၅၀၅၉ ၃၀၆ ၂၀၇ ၅–၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ အမေရိကန် 
၂၀၂၀ XXXII တိုကျိုမြို့ ဧကရာဇ်နာရူဟီတို (expected) ၃၃ (၅၀) TBA TBA TBA ၃၃၉ TBA ၂၃ ဇူလှိုင် – ၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ [upper-alpha ၇] TBA 
၂၀၂၄ XXXIII ပဲရစ်မြို့ ပြင်သစ် သမ္မတ (expected) TBA TBA TBA TBA TBA TBA ၂၆ ဇူလှိုင် – ၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၄ TBA 
၂၀၂၈ XXXIV လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အမေရိကန် သမ္မတ (expected) TBA TBA TBA TBA TBA TBA ၂၁ ဇူလှိုင် – ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၈ TBA 
၂၀၃၂ XXXV TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA TBA
↑ The IOC webpage for the 1900 Summer Olympics gives the erroneous figure of 95 events, while the IOC database for the 1900 Summer Olympics lists 85. The discrepancy isaprobable consequence of the figure 95 being derived from the "1900 Olympic Games — Analysis and Summaries" publication of Bill Mallon, who used his own determination of which sports and events should be considered as Olympic.
↑ The IOC webpage for the 1904 Summer Olympics gives the erroneous figure of 91 events, while the IOC database for the 1904 Summer Olympics lists 94. The discrepancy isaprobable consequence of the figure 91 being derived from the "1904 Olympic Games — Analysis and Summaries" publication of Bill Mallon, who used his own determination of which sports and events should be considered as Olympic.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Although the Games of 1916, 1940, and 1944 were cancelled, the Roman numerals for those Games were still applied because the official titles of the Summer Games count the Olympiads, not the Games themselves, per the Olympic Charter. This contrasts with the Winter Olympics, which ignore the cancelled Winter Games of 1940 and 1944 in their numeric count.
↑ The IOC webpage for the 1920 Summer Olympics gives the erroneous figure of 154 events, while the IOC database for the 1920 Summer Olympics lists 156.
↑ The IOC webpage for the 1956 Summer Olympics gives total of 151 events (145 events in Melbourne and6equestrian events in Stockholm).
↑ Owing to Australian quarantine laws, six equestrian events were held in Stockholm for the 1956 Summer Olympics several months before the other events in Melbourne; five of the 72 nations competed in the equestrian events in Stockholm, but did not attend the main Games in Melbourne.
↑ The 2020 Summer Olympics was originally scheduled for 24 July to9August 2020, but was postponed until 2021 due to the COVID-19 pandemic. However, the event is still referred to as the 2020 Summer Olympics to preserve the 4-year Olympiad cy//cle.
↑ Even in London, French is mandatory at the Olympics။ Embassy of France, Washington, D.C. (8 August 2012)။
↑ The Olympics at the Millennium: Power, Politics, and the Games။ 2000။ p. 271။
↑ Tarasouleas, Athanasios. "The Female Spiridon Loues".
↑ Macy၊ Sue (2004)။ Swifter, Higher, Stronger။ Washington D.C, United States: National Geographic။ pp. 16။ ISBN 0-7922-6667-6။
↑ 1896 Athina Summer Games။ Sports Reference။ 31 January 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Olympic Summer Games Factsheet။ International Olympic Committee။5August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "RESULTS" (in en)၊ olympic.org။
↑ 1900 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IOC database for the 1900 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 1900 Olympic Games — Analysis and Summaries (PDF)။3July 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 1904 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IOC database for the 1904 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 1904 Olympic Games — Analysis and Summaries (PDF)။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lennox၊ Doug (2009)။ Now You Know Big Book of Sports။ Dundurn Press။ p. 223။ ISBN 978-1-55488-454-4။
↑ 1920 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IOC database for the 1920 Olympic Games။ Olympic.org။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 1956 Olympic Games။ Olympic.org (22 November 1956)။ 10 February 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ IOC makes historic decision in agreeing to award 2024 and 2028 Olympic Games at the same time (11 July 2017)။ 13 July 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
အိုလံပစ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား ကြည့်ရှုနိုင်သော တရားဝင် ဆိုဒ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နွေရာသီ_အိုလံပစ်_အားကစားပွဲတော်&oldid=719098" မှ ရယူရန်
ပြင်သစ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။